Oath of Glory bụ MMO ọhụrụ eji enwe anụ ụlọ | Gam akporosis
Dere na anụ ụlọ gị na MMO a kpọrọ Oath of Glory
Agbanyeghị na o nweghi ọtụtụ nyocha, ma ọbụghị na anyị masịrị ụdị MMO a, Oo iyi dị ebube bụ otu ihe adịghị njọ ma ọlị na na, ọ bụ ezie na ọ na-eji akpaka ọgụ na-eduzi anyị ka anyị ọzọ na ndị dị otú a n'ụzọ, o nwere ezu na-ama esịn ya iji gosi ya.
Ma ọ bụ na taa ụdị egwuregwu ndị a na-aghọ ụkpụrụ n'ihi na ọtụtụ egwuregwu na ha adịghị ọbụna na-agbalị na onye na-amanye ha sere njikwa na usọ, na-eche ihu ọtụtụ narị ndị iro. Anyị ga-eme ya na egwuregwu a nke ọma edepụtara nke chọrọ obodo nke ndị egwuregwu maara otu esi eji ya akpọrọ ihe.
1 A ụwa nke anwansi na gị Pita
2 Họrọ ịbụ ọkachamara, ịma mma, ma ọ bụ onye agha na Oath of Glory
3 Soro ndị ọrụ ibe gị na ndị ọzọ gwuo egwu
A ụwa nke anwansi na gị Pita
Ewezuga ya anyị protagonist na ya 3 dị iche iche ọmụmụIji họrọ n'etiti nwoke ma ọ bụ nwanyị, otu n'ime njirimara nke Oath of Glory bụ ikike ọ na-enye anyị ka anyị were anụ ụlọ anyị ga-enyere anyị aka n'ọrụ anyị nke ịkwụsị mwakpo ndị mmụọ ọjọọ na mpaghara ahụ na Nke anyị zutere.
Egwuregwu nke na-eitomi ọtụtụ ndị ọzọ na nke na-anaghị ahapụ ma ọlị usoro nkịtị nke anwansi na ụwa ochie nke ọ nwere elu ya n'ịntanetị na World of Warcraft si Blizzard. N'ezie, ọ na-eji akpaka nke mere na site na mbido ọ na-agwa anyị ka anyị nabata ya ka anyị wee nwee ihe ọ bụla karịa ịpị «ịwụ» ka ịwụfere cinematiki, ma tinye akụrụngwa ka mma.
Dịkwa ka ndị ọzọ, mgbe anyị nwetara akụrụngwa ọhụrụ, a na-ewepụta windo maka anyị ka anyị wee kwadebe mgbe ọ dabara na anyị ga-eme ya. Na Nanị nkwarụ bụ na aesthetics nke ihe anyị na-eyi adịghị egosipụta na avatar ma obu protagonist anyi.
Họrọ ịbụ ọkachamara, ịma mma, ma ọ bụ onye agha na Oath of Glory
Na mbụ anyị Họrọ site na klas 3: Ọkachamara, Enchantress, ma ọ bụ Warrior. Onye ọ bụla n'ime ha nwere usoro nke ike ya, mana ka anyị agaghị achọ ịpị ha, ihe fọrọ nke nta ka anyị gabiga ruo mgbe anyị malitere ịbanye n'ime egwuregwu ahụ.
Nke mbụ ihe niile na-adị mfe ma anyị kwe ka ụwa ahụ na-eduzi anyị, nke arụghị nke ọma, na nke anyị ga-akụ azụ, ma-ọbụ kpokọta site na ohia; ihe a niile na-akpaghị aka dị ka ọ na-enweghị ike ịbụ n'ụzọ ọzọ.
Ee anyị ga-eme na-emeghe akpọchi kpara ngwá na rụọ ọrụ anyị anu ulo na ụfọdụ ndị ọhụrụ. Ma na site na egwuregwu egwuregwu na Google Play ọ na-adọ aka ná ntị na anyị na-eche ihu usoro ọgụ mgbanwe, Genshin Impact ee ọ bụ, anyị nọ na-erikpu obere achọtaghị ihe na-adọta anya.
Soro ndị ọrụ ibe gị na ndị ọzọ gwuo egwu
Bebụ a ghọtara MMO na anyị nwere ike izute ndị egwuregwu ndị ọzọ, ma ebe ọ bụ na e bipụtara ya ụbọchị ole na ole gara aga, anyị agaghị ahụ ọtụtụ ndị egwu egwu ugbu a, yabụ ọ bụrụ na ịchọrọ inwe oge na-enweghị ndị ahụ, ọ nwere ike ịbụ egwuregwu kwesịrị ekwesị iji nwee ezigbo ndị ọrụ ibe.
Anya nwere arịrịọ ya na njirimara agwa nke na-echetara anyị oge ochie Zeldas (mana oge ochie). Ejirila ụwa ma kee ya nke ọma na ebumnuche na-ebute na anyị nọ n'ime ụwa na-adịgide adịgide iji chọta ndị ọzọ. Ọ dịghị njọ ma ọlị, ma ọ dịghị ihe anyị na-adịghị ahụ na egwuregwu ndị ọzọ.
Oath of Glory noro na ni fu ni fa Ọ fọrọ nke nta ka anyị nye anyị obi ụtọ ma ọ bụrụ na onye ọrụ ibe anyị kpọọ anyị ka anyị kpọọ egwuregwu. A MMO dị ka ọtụtụ ndị ọzọ na ị nwere ike ịnwale ikpebiri onwe gị.
Dị mfe ma ọ naghị eweta ihe ọhụụ ọhụụ ma ọ bụghị ịbụ MMO ọzọ ebe anyị nwere ike izute ndị ọrụ ibe anyị.
Usoro edemede: 5,4
3 dị iche iche ọmụmụ
Nwee anụ ụlọ na ọtụtụ ihe ị ga-eme
Mara mma na ndịna-emeputa na-mara mma ewepụghị
Ọ bụghị na Spanish, ma ọ ga-abata dị ka dụrụ n'ọdụ
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Dere na anụ ụlọ gị na MMO a kpọrọ Oath of Glory
OPPO X 2021 na-egosi nnukwu mpịakọta ihuenyo ya na vidiyo
3 free uzo ozo ka LastPass, paswọọdụ manager na bụ aba free